★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင် ဘ၀နှင့် စရိုက်
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူတွေဟာ သတင်းတွေထဲမှာ မြင်ရရင် သူတို့ ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ လုပ်ရင်း ဘ၀တွေဟာ သာယာနေပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဘ၀ကတော့ လမ်းဘေးက ခွေးလောက်တောင် စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိပါဘူး
တခြားဘာသာတွေက လမ်းပေါ်မှာ စုရင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက်ပါ၊ ကုလားတွေစုရင် ဟစ်အော် ဆန္ဒပြပြီး ဆူညံဖို့ဖြစ်တယ်။
လူဘ၀က ငိုတာနဲ့စပြီး ငိုတာနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုပေမယ့် . . . မသေခင်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင်ပါပဲ။ မွတ်ဆလင်တွေက အချိန်ပြည့်ငိုယိုနေရတာပါ။
ကုလားတွေက သည်းခံရင်ကြောက်တယ်ထင်ပြီး လူကိုဆော်ကားတယ်။ ပြန်လုပ်ရင်တော့ အင်မတန်ကို ကြောက်တတ်ပါတယ်။ သူတို့ခံရပြီဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ပါးစပ်က လုံးဝကို မချတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကြိမ်များစွာ ဆော်ကားခဲ့ပါတယ်။ အခုမွတ်ဆလင်ကို တကယ်ကို အမြစ်ကနေလှန်မယ်လုပ်တော့ မျက်ရည်လေးဝဲ ပြီး. .. ဘာသာရေးကို မဖျက်ကောင်းဘူးဆိုပြီး အခြောက်သံနဲ့ ပြောနေပါပြီ။
ခွေးသေ၊ ၀က်သေ သေရတဲ့ အဖြစ်ဟာ မွတ်ဆလင်တွေအတွက် မထူးဆန်းပါဘူး
တခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို ဖျက်ဆီးပါတယ်။ လူတွေကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပါတယ်။ တခြားဘာသာတွေကို သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်မပေးပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ယုတ်မာနေပါစေ . . . မွတ်ဆလင်ကို ဝေဖန်ရင် မကောင်းဘူးဆိုပဲ။
ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဂျူး၊ ဟိန္ဒူ အားလုံးပူးပေါင်းပြီး အဖြစ်ဖြုတ်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 3:58 AM
ကုလားတွေနဲ့ ပေးစားခဲ့တာ ဖိုဝိန်းကလူတွေသိတယ်။
(သူတို့ ပုတီးမှာလည်း ၀က်လီးဝက်တန်ဆာ ပုံ အမြတ်တနိုးထည့်ထားတာနော်။)
ဒါပေမဲ့ သူတို့ ရဲ့့
မက္ကာရွှေမြို့တော်ကွ. အလာဟ်အသျှင်မြတ်ရဲ့နန်းတော်ပဲ. မှတ်ထား. နန်းတော်ထဲကို သူပုန်အ၀င်မခံဘူး။ အစ္စလာမ်ကို လက်မခံတဲ့သူက သူပုန်ပဲ။ ခေါင်းဖြတ်သတ် တာတောင်နည်းသေးတယ်။ မှတ်ထား။ သိပ်တရားပါတယ်။